MUQDISHO, Soomaaliya - Wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxwaynaha Soomaaliya, Maxamed Maxamed Cabdullaahi [Farmaajo] ayaa lagu shaaciyay xil ka qaadi iyo magacaabis lagu sameeyay Garsooreyaasha Maxkmadda Sare ee dalka.
Sidoo kale, waxaa xilka looga qaaday Garsoorayaashii horey ujoogay Maxkamadda sarre dalka, waxaana lagu sheegay in magacaabista ay timid keddib soo jeedin ka timid Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Mudane Baashe Yuusuf Axmed
Garyaqaannada xilalka loo magacaabay:
Garyaqaan Saalax Sheekh Ibraahim Dhiblaawe.
Garyaqaan Maxamed Cumar Axmed.
Garyaqaan Cabdalle Macalin Maxamed.
Garyaqaan Xaydar Barqash Abukor.
Garyaqaan Axmed Cali Muuse.
Garsooriye-yaasha xilalka laga qaadey:
Sheekh Abuukor Cismaan Macalin Daahir.
Maxamed Maxamuud Maxamed.
Maxamuud Axmed Faarax.
Sheekh Cumar Aadan Maxamed.
Cabdinaasir Seeraar Axmed.
Axmed Maxamed Sheekh Ibraahim
“Madaxwaynaha wuxuu farayaa in Garsoorayaasha cusub ay dhawraan sarreynta sharciga dalka iyo in ay si siman ugu adeegaan shacabka,” ayaa lagu yiri Wareegtada.
Talaabadaan ayaa kusoo beegmaysa xili ay isa soo tarayeen mudooyinkii dambe cabashooyinka ka imaanaya shacabak oo ku aadan cadaalo darro baahsan oo ka jirta maxkamadaha dalka, gaar ahaan kuwa Muqdisho.
Somaliland ayaa bayaan cad kasoo saartay arrimaha Shirka Brussels ee looga hadlay...
XOG: Madaxweynaha Soomaaliya oo Diidey Codsi Uga Yimid Beesha Caalamka
Soomaliya 13.10.2017. 19:32
Wasiir katirsan Xukuumadda Khayre oo hortagay Gollaha Shacabka
Soomaliya 06.10.2018. 14:05